YAAB: Bal ka waran Sergio Busquets ma istimcaalo Baraha Bulshada oo idil…..(Facebook, Twitter, Instagram iyo xitaa snapchat) – Gool FM
YAAB: Bal ka waran Sergio Busquets ma istimcaalo Baraha Bulshada oo idil…..(Facebook, Twitter, Instagram iyo xitaa snapchat)
Byare December 30, 2017
(Europe) 30 dis 2017. Way adag tahay in la suureysto inuu jiri karo qof caan ah oo ku nool caalamkan tagay oo cirka tiigsanaya misane ka caagan baraha bulshada sida Facebook, Twitter, Instagram iyo snapchat.
Isku xiraha Barcelona Sergio Busquets ayaa ah laacibka kaliya ee kooxda reer Catalonia ee aan isticmaalin Baraha Bulshada si uu ugu noolaado nolol sahlan oo aan mashquul badneyn.
Sport ayaa sheeganeysa in Busquets uusan xitaa jeclayn inuu ka Chat-tamo Whatsapp wuxuuna taa badelkooda doorbidaa inuu taleefan ka woco asxaabtiisa.
Intaa oo kaliya maahanee xiddigan heysto dhaqankii hore ayaa xitaa la sheegayaa inuu taleefankiisa saaro ‘Silent’ marka uu dadka kale la joogo, maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay in waqti xaadirkaa uu u baahan yahay dadkaasi ag jooga uun.
Go’aanka shaqsi ahaaneed ee Busquets ayaa xitaa waxaa mid yaab leh ka sii dhigaya markaad ka fikirto in ciyaartoy badan ay Baraha Bulshada u usticmaalaan si ay u kor ugu qaadaan muuqaalkooda si ay ugu soo jiitaan Xayaysiimo.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Spain ayaa xitaa daaha ka rogay inuu ka takhalusi lahaa mashaariicdan haddii uu awoodo.
“Haddii aan anigu go’aanka lahaan lahaa, waan ka takhalusi lahaa Twitter si aan u joojiyo muuqaalada been abuurka ah iyo dadka ku hadlaya isla markaana sameynaya waxay donaan,” Busquets ayaa sidaa u sheegay El Larguero on Cadena Ser.
GOOGOOSKA: Verona vs Juventus 1-3 (Dybala oo Verona kala diray)
Man United oo ka dhacday kaalinta 3-aad...+SAWIRRO